GAROWE, Puntland- Liibaan Jaamac iyo Caa’sha Cabdisalaam, waxaa Lammaane xafladdooda Arooska ku qabsaday magaalada Galkacyo xarunta gobolka Mudug, kuwasoo u dhigay nidaam ka duwan sida Somalidu dhaqanka u leedahay.
Labadan ruux ee nolosha wadaagay, ayaa door biday in kharasha guurkooda iyo cuntooyinka la bixiyo u weeciyaan inay ku taageeraan dadka abaartu saamaysay ee ku sugan gobolka Mudug, kuwaasoo ay haysato xaalad adag oo u baahan in wax laga qabto.
Liibaan oo la hadlay Radio Garowe, ayaa faah faahin ka bixiyay ujeedka ku kalifay arrintan, wuxuuna sheegay inay u damqadeen bulshadooda islamarkaana la qaybsanayaan dhibka.
Wuxuu xusay in isaga iyo marwadiisa ay yihiin dad ka shaqeeya arrimaha bini aadanimada arrintana ay u sameeyeen si dhalinyaro badan oo ku haminaysa inay qoys dhistaan ay caawiyaan dadkooda abaartu ku dhufatay.
Caruuska ayaa xusay in guurkoodu kusoo aaday waqti adag, balse ay isku waafaqeen inay tusaale fiican u noqdaan dadka ku xiga dhanka aqal galka, isagoo ku booriyay inay bixiyaan wax kasta oo ay u awoodaan.
Inkastoo uu cudur daar ka baxshay inaysan kaafin karin deeqda ay gaarsiiyeen dadkaas, hadana wuxuu Liibaan ku macneeyay tallaabada ay qaateen dareen damqasho iyo inay jirto xaalad aan indhaha laga qarsan kari.
Wuxuu bogaadiyay dadaallada gurmadka ah ee ka socda Somalia, kuwaasoo ay wadaan sama-falayaal iyo dhalinyaro kala duwan.
Guurkan lammaanahan oo dhacay Khamiistii ayaa aad looga hadal hayay baraha bulshada, waxaana jiray fariimo kala duwan oo loo diray Caruuska iyo Caruusadda sida Liibaan uu sheegay, waxayna bulshadu ku bogaadiyeen go’aanka ay qaateen.
GAROWE, Puntland- Kadib markii Madaxweynaha dowlada Fedeaalka ee Somalia Maxamad Cabdulahi Farmaajo amrey in maamulada dalka ka jira loo qaybiyo dakhligii kasoo xeroodey murashaxiintii u tartameysay xilka Madaxweynaha ...
Caalamka 04.03.2019. 12:27
Somaliland oo diidey lacagihii dowlada Federaalka ku bixineysay abaaraha
Somaliland 25.05.2017. 20:58
​Farole oo ka qayb galay shir Abaaraha Puntland looga hadlayay [Sawirro+Cod]
Puntland 15.11.2016. 23:00
Roobab xoogan oo ka da'ay Somaliland Dadna ku dhinteen
Somaliland 27.03.2017. 18:38